UHANUMAN CHALISA: UKUBALULEKA KOKUFUNDA UHANUMAN CHALISA- PAMPEREDPEOPLENY.COM - YOGA-YOKOMOYA
UHanuman Chalisa: Ukubaluleka kokufunda uHanuman Chalisa
Iimuvi USara Ali Khan Ukwabelana ngeeholide zakhe zekhephu kunye noMama wakhe u-Amrita Singh Akanakuphikwa
Iindaba Unyulo lwe-West Bengal: I-EC iyayinqanda inkokheli ye-BJP uRahul Sinha kwiphulo lokukhankasela iiyure ezingama-48
Ekhaya Yokomoya yeYoga Inkolelo eyimfihlakalo Ukholo Mysticism oi-Abhishek Ngu UAbhishek | Ukuhlaziywa: NgoLwesine, Septemba 24, 2020, 13:53 [IST]
UHanuman Chalisa ngumsebenzi odume kakhulu obhiyozela kwaye ubabaza umoya ongenakoyiswa kunye nenkalipho engapheliyo yeNkosi uHanuman. Eyaziwa ngokuba ngumsebenzi onamandla kakhulu wokuzinikela, uHanuman Chalisa waqanjwa ziiTulsidas ezinkulu, umntu ozinikeleyo eNkosini uRama. UTulsidas, phakathi kwezinto ezininzi anikwe zona, waziwa kakhulu ngowona msebenzi wakhe ubalulekileyo- UTulsi Ramayana . Ukuza kumbuzo wokuba yintoni kanye kanye le ibalulekileyo ngokubaluleka kukaHanuman Chalisa, masiqonde isiseko salo msebenzi unamandla kwaye kuthetha ntoni ukucula uChalisa. FUNDA NAKHO: INDIMA YENKOSI HANUMAN KWI-MAHABHARAT
Eli nqaku lithetha ngokubaluleka kukaHanuman Chalisa. Phantse yonke ivesi yeHanuman Chalisa inxulunyaniswa nezibonelelo ezininzi. Ivesi nganye okanye i-couplet ibizwa ngokuba yi Doha . Masibone iivesi ezithile ezibalulekileyo zeChalisa kunye nezibonelelo ngokubanzi zokucengceleza uHanuman Chalisa.
Xa ucengceleza ibinzana lokuvula elithi 'Jaya Hanuman Gyaan Guna Saagar' liyakunika umntu ulwazi oluvela kubomi babantu bonke. Ngoncedo lolu lwazi, phantse akunakwenzeka ukuba ungaphambuki kwimiceli mngeni emininzi yobomi.
ubunyusa njani ubunzima bomntwana esibelekweni
Idoha yesithathu yeHanuman Chalisa, eqala ngo 'Mahavir Vikram Bajrangi' inceda ukunika amandla ebantwini kwaye bahlale ngaphandle kwempembelelo yenkampani engathandekiyo.
Iivesi ezisixhenxe nezesibhozo zikaHanuman Chalisa ziya kunceda umntu aqonde umoya weNkosi uRama kwaye asondele kwindawo kaThixo.
I-14 neye-15 uChaupayis iyakunceda ekunikezeleni umntu nodumo olufanelwe. Uya kuthakazelelwa kwimizamo yakho kunye namandla akho okwenza imisebenzi efanelekileyo iya kukhula kuphela.
I-11 Chaupayi izokunceda ukususa uloyiko kwiinyoka kunye nezinye iindlela zokulunywa yityhefu.
I-16 neye-17 uChaupayis izokunceda ekufikeleleni kwindawo enqwenelekayo ebomini. Iyahambelana nomnqweno wokunyuselwa kunye nezikhundla kwindawo yomsebenzi.
Izibonelelo zokutya imihla nobisi
Eli lama-20 liza kunceda ekoyiseni imiceli mngeni nasekoyiseni imiqobo eyahlukeneyo enokuthi ize nokusithintela ekufezekiseni iinjongo zethu.
I-24 Chaupayi, ebalulekileyo, inceda ekupheliseni nasekukhuseleni impembelelo yeDaakinis, Pisachas, Bhots kunye noothixo bomlingo omnyama.
Njengale, yonke i-doha yeHanuman Chalisa inezibonelelo ezahlukeneyo eziboshwe kuyo. Yiyo ke loo nto ukubaluleka kukaHanuman Chalisa.
i-orenji ye-peel mask yokugcoba ulusu
iziphumo ebezingalindelekanga zamanzi okusela kwijagi yobhedu
shab e barat 2018 kumhla we-india
indlela yokulahla amanqaku olula emva kokubeleka
Ukufaka ilamuni ebusweni yonke imihla kuyingozi
Uyenza njani iqanda le-chow mein ekhaya